[RASMI] dr.fone - macruufka Private Data Eraser: Eraser iPhone joogto ah
dr.fone xidhmo - macruufka Eraser Data Private
Si fudud u ogolaan in aad macluumaadka shakhsiga ka Your Device
Waxaad dooran taas oo xogta aad rabto in aad masixi.
Cadaymihii macluumaadkaaga shakhsiyeed aad ka tuugada aqoonsiga ilaalin doona. xidhmo dr.fone - macruufka Private Data Eraser iskaan doonaa qalab aad xogta gaarka ah iyo oggolaadaan in aad doorato alaabta in ay si joogto ah la tirtiro.
Wax walba waa Erasable
Photos, fariimaha, xiriirada, qoraalada, bookmarks Safari iyo taariikhda call aad wax alla waxa la tirtiri karaa dhex jira. Data tirtirayaa isticmaalaya this macruufka Private Data Eraser marnaba la soo kabsaday karo.
Masixi iPhone: Sawirka iyo ku eegaan xogta gaarka ah oo lacag la'aan ah
Waxaad isticmaali kartaa tirtire iPhone si scan qalab aad iyo ku eegaan dhammaan macluumaadka gaarka ah helay mid ka mid ah. Waa lacag la'aan.
Masixi iPhone: tirtiray oo jira gaarka Labaduba waa checkable
Ma aha oo kaliya u eegidda iyo cadaymihii macluumaadka gaarka ah ee hadda jira on qalab aad, laakiin sidoo kale ka heli kartaa macluumaad gaarka kuu ah recoverable on your iPhone ama iPad, iyo waxa ay si joogto ah masixi si aan ninna u raad raaco karo.
Masixi iPhone: Awood u masixi noocyo badan oo xogta gaarka ah
tirtire iPhone Tani waxay aad u saamaxaaya in ay masixi macluumaadka gaarka loo leeyahay sida sawiro, fariimaha, xiriirada, wac taariikhda, qoraalada, jadwalka, xusuusinta iyo bookmarks Safari.
Masixi iPhone: 1 click in ay masixi oo dhan ama eegista masixi waxyaabaha sida aad rabto
Waxaad ka eegi kartaa natiijada scan oo dhan iyo masixi dhammaan xogta la mid click. Ama waxaad eegista masixi karaan waxyaabaha aadan rabin in ay sii.
Masixi iPhone: masixi oo dhan iPhone, iPad iyo iPod taabashada
arrinta No aad isticmaalayso iPhone ugu dambeeyay 7, iPad Pro, ama iPhone hore 4, iPad 1, tirtire this xogta iPhone si buuxda u socon kara oo dhan lagu daydo ee iPhone, iPad iyo iPod taabashada.
tirtire xogta iPhone Tani gebi ahaanba la akhriyo keliya software. Waxaa sii haysan maayo, wax ka beddelo ama daadato xog kasta oo ku saabsan qalab aad. Waxaan qaadan xogta shakhsiga ah iyo warsan dhab ah. Waxaad had iyo jeer tahay qofka keliya waxaa ka heli kartaa.
Masixi kasta oo nooc oo Privacy on Your iPhone / iPad
Waxa aad u masixi karaan ka iPhone? Waxaad isticmaali kartaa qalab this si masixi macluumaadka gaarka on your iPhone, oo ay ku jiraan sawirro, fariimo iyo lifaaqyada, xiriirada, wac taariikhda, qoraalada, jadwalka, xusuusinta iyo bookmarks Safari.
3 tallaabo fudud.
data tirtirayaa waa weligiis tegey.
Si fudud u masixi Dhammaan xogta ka qalab aad. Oo qofna abid soo kaban karo oo u eegto xogta aad.